Center Expo Award - Expo momba ny varotra iraisam-pirenena Florida
Tongasoa eto amin'ny PlayFlorida Expo Award Center. Ny ivon-toerana loka dia novolavolaina mba hampirisihana ny fifanakalozan-kevitra eo amin'ny mpanatrika sy ny mpanentana ary hanolotra loka ho an'ireo izay naneho ny taha lehibe indrindra amin'ny fandraisana anjara amin'ny Expo. Amin'ny maha-fampirantiana voasoratra anarana na mpitsidika voasoratra anarana anao, dia efa niditra tamin'ny fifaninanana ianao, saingy tsy voatery atao ny fandraisanao anjara. Mba hilalaovana dia fenoy tsotra izao ny maro amin'ireo fanamby ao amin'ny lisitra etsy ambany. Ny fanamby tsirairay vita dia hahazo isa anao. Ireo mpilalao manana isa betsaka indrindra amin'ny faran'ny Expo dia mandresy. Hanomboka ny 16 ka hatramin'ny 18 martsa ny fanamby. Ny mpandresy dia hambara amin'ny 18 martsa 2021 amin'ny famaranana ny Expo.
Loka mpilalao telo (3) voalohany:
Loka faha-1 - Karatra fanomezana Amazon $ $ 750.00 aloa amin'ny US Dolara.
Loka faha-2 - Karatra fanomezana Amazon $ 500.00 aloa amin'ny US Dolara.
Loka faha-3 - Karatra fanomezana Amazon $ 250.00 aloa amin'ny US Dolara.
Tombony azo amin'ny famitana ireto fifandraisana virtoaly manaraka ireto:
Mahazoa isa 50 isaky ny minitra atiny video nojerena.
Mahazoa isa 40 amin'ny fipihana eo amin'ny bokotra tsirairay, horonan-tsary, ary fampahalalana mifandraika amin'ny fampiratiana.
Mikaroha trano heva fampirantiana manerana ny tranokala ary kitiho ny zana-trondro handao ny mombamomba anao. Mahazoa isa 25 isaky ny booth notsidihina.
Mahazoa isa 150 isaky ny webinar mivantana izay nojerenao manontolo.
Mahazoa teboka 25 amin'ny fipihana ireo logo, horonan-tsary ary katalaogy mifandraika amin'ny mpanohana.
Manantena ny fandraisan'anjaranay izahay!